Kawafa wafa: Yini le efelwa kangaka ebukhanseleni, kungani ingeke iphele? - Bayede News
Kawafa wafa: Yini le efelwa kangaka ebukhanseleni, kungani ingeke iphele?
Izindaba zokubulawa kwamalungu omphak thi abehambele umhlangano weqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) eNanda KwaZulu-Natal zivuse emidala imilando ngodlame kulesi sifundazwe. Laba ababulewe nabalimele okungabesifazane bafayelwe ngentululwane yezinhlamvu ngabantu abebehamba ngemoto okuthiwa igile lomkhuba yabe isinyamalala. Ukwethuka okukhulu ngokokuthi lokhu kwenzeka sekusele izinsuku ezingengaki kube nokhetho loHulumeni Bendawo nolubekwe ukuba lube mhla lulu-1 kuLwezi nonyaka.
Yize kungaveli ukuthi laba ababulewe bekungabantu abanobulungu bukaKhongolose noma amalungu nje omphakathi abehambele umhlangano we-ANC, kukhona ukwethuka kokuthi abantu ababulewe babulawele embuthanweni weqembu elibusayo osekujwayelekile ukuthi embangweni wamalungu alo kube nokuklwebhana, ukuklolodelana nezidumbu phansi.
Ekhuluma kuthangi umhlaziyi wepolitiki uDkt uProtas Madlala uthe kuhle iqembu elibusayo lizinuke amakhwapha ngoba ukubulawa kosopolitiki KwaZulu-Natal kuthinta lona kakhulu.
Khona lapho uHlokohloko uthe kubukeka konke lokhu kuwumbango wamaphalishi.
“Kwakukhona isikhathi lapho ukuba yikhansela kusho ukuba yisisebenzi somphakathi kungekho iholo noma inzuzo etheni. Nokho manje akusenjalo, abantu sebeya ebukhanseleni ngenhloso yokuhlomula”, kusho uHlokohloko.
Ngokwezibalo bangama-278 omasipala kuleli, bakhiwe yilabo abakhulu abayisi-8, kube neMikhandlu emikhulu engama-44 bese yona yelanywa ngomasipala abancane abangama-226. Ngokwezibalo zakamuva ze-Independent Electoral Comission (IEC) ayizi-3 884 amakhansela amawadi eNingizimu Afrika.
La makhansela angahlukaniswa ngamaviyo amane; kukhona lawo avela emaqenjini epolitiki bese kuba khona lawo azimele. Kubuye kube khona lawo avotelwe ngokwezigceme noma amawadi bese kuba khona lawo angena njengengxenye yohlu atshalwe ngokulingana. Izibalo ziveza ukuthi amakhansela amawadi esilisa ayizi-2 639 (67.96%) kanti awesifazane wona ayi-1 245 (32.05%).
Ngokombiko we-IEC isifundazwe iKwaZulu-Natal inamakhansela amawadi amaningi ezweni njengoba ebalelwa kwangama-768 (17.77%). Kanti komasipala kukhona labo abasemadolobheni nalabo abasemakhaya bese kuba khona nalabo abanothile nalabo abahlwempu. Ukunotha nokunganothi kudalwa phakathi kokunye wukutshalwa kwezimali nokuqinisa umnotho wendawo kanjalo nezinga lempilo yalabo abayizakhamizi.
Komasipala abakhulu abafana neTheku izakhamizi zakhona zinawo amandla okukhokha kanti ezindaweni ezifana nakoNongoma lokhu kulukhuni.
Enye into ephawulekayo ngomsebenzi wobukhansela yimihlomulo kanye namavenge atholakalayo. Ngesikhathi ethula isiphakamiso sokukhushulwa kwamaholo amakhansela lowo owayenguNgqongqoshe ngaleso sikhathi, uDkt uZwelini Mkhize wathi emuva kokubonisana naBaphathiswa bezifundazwe wanquma ukuthi amakhansela kawanyuselwe imali. Ngokwesiphakamiso kwathiwa amakhansela asebenza ngokugcwele njengezimeya zamadolobhakazi zizohlomula isi-R1 350 250 ngonyaka sekubalwe konke, osomlomo nosekelameya bona bahlomule isi-R1 090 488, kuthi amalungu ekomidi lesigungu esiphezulu, osotswebhu nozihlalo bemikhandlu emincane bahlomule isi-R1 027 223.
Amakhansela akhethelwe kumasipala wesifunda avunyelwe ukuthola imali yokuba semhlanganweni eyi-R1 020 kungakhathelekile ukuthi umhlangano womkhandlu wesifunda noma owekomidi ngalelo langa. Lawo makhansela asebenza ngaphansi kwesakhiwo iSouth African Local Government Association nawo anomhlomulo we-R1 060 wokuthamela umhlangano. Isaziso sasithi onke amakhansela azokhokhelwa imali kamakhalekhukhwini engeqile ezi-R3 400 ngenyanga. Lokhu kwengeza emi loweni yawo onke amakhansela.
Onke amakhansela azobuye ahlomule ngemali yedatha engeqile ema-R300 ngenyanga. Nokho lokhu kweleka ngaphezu komthamo wamaholo abo.
Isaziso sibalula ukuthi umasipala kufanele uthathe umshwalense ozobhekana nezindleko zokulahleka noma ukonakala kwempahla, kanye nowokufa nokukhubazeka ekulahlakelweni noma ekonakeleni okubangwa yimibhikisho, iziphithiphithi emphakathini, iziteleka noma izinxushunxushu emphakathini. “Umshwalense okhethekile wezindlu ngeke udlule esigidini nengxenye samarandi (R1.5m) kanti kowezimoto ugcina ezi-R750 000.
“Umshwalense wokufa nokukhubazeka awedluli emthamweni weholo ophindwe kabili wekhansela.” Ngokwesaziso, umasipala angahlinzeka ‘okokusebenza’ okuyizinsizakalo kumakhansela ukuze enze umsebenzi wawo ngokwanelisayo nangokufanelekile, Phakathi kokunye okungaba ihhovisi, amakhadi omsebenzi, izincwadi ezingamakhadi namadayari.
Onke amakhansela kufanele abe nama-laptop noma ama-tablet kuthi lawo angaboni athole okokufunda ngohlelo lweBraille. Izimeya ezisebenza ngokugcwele zingahlinzekwa ngendawo yokuhlala esemthethweni, enakho konke ngisho nefenisha. Ukuphepha kwamakhansela kusohlwini ‘lwezinto zokusebenza’. “ISikhulu Sezimeya, imeya noma usomlomo akufanele abe nabaqaphi abangaphezu kwababili. Uma kukhona okuhlukayo kulokhu kuzofanele kube kunconywe abakwaSAPS,” kufundeka isaziso.
Phezu kwalokhu lawo makhansela ayizigilamkhuba angena aze asithele ngezicoco enkohlakalweni yamathenda kwazise yiwo athatha izinqumo ngemiklamo yezigidi. Kukhona izinsolo zokuthi kuwo la makhansela asuke esegile umkhuba kawadeli nokuthi akuvikela ngesibhamu kokunye ukucosha amavenge lawa.
Umbiko wophenyo ukhomba umgolo
Umbiko owakhishwa yiKhomishana eyabe iholwa ngumumeli u-Adv uMoerane nowaziwa nge: Report of the Moerane Commission of Enquiry into the Underlying Causes of the Murder of Politicians in KwaZulu-Natal, ucishe wasidweba sonke isithombe salokho okwamukelwa njengodlame lwepolitiki.
Kulo mbiko iKhomishana ithi yathola lokhu okungezansi njengembangela yokubulawa kosopolitiki:
Osopolitiki abaningi babesezingeni lomasipala okubandakanya amakhansela maningi, labo ababengaba ngamakhansela, abaholi bamagatsha ezinhlangano zepolitiki.
Imigoqo ekuvimbela ukuba yikhansela yinto ecishe ingabi bikho. Uma nje udumile noma waziwa ungafundile futhi ungafundelanga msebenzi uyakwazi ukuba yikhansela.
Ukuqokelwa esikhundleni sokuba yikhansela kunikeza lowo muntu amandla ezepolitiki okwakha ithuba lokuthi athole izinsizakalo ngamathenda nangezinye izindlela zezezimali, okuholela enkohlakalweni, ukwenza izinto ezingenamqondo kanye nokuhhilela nje.
Ukuqokwa njengekhansela kuvumela ukukhula komuntu ngokwezimali nangokwenhlalo. Kanjalo nokulahlekelwa yisikhundla kusho ukulahlekelwa ngokwezimali nangesimo senhlalo.
Ukukhuphukela esikhundleni sobukhansela umuntu kumbeka esimweni sokubanomthelela ekunikezelweni kwamathenda bese kuveza intuba yokuba kwenzeke ngentando yakhe ukuze azuze.
Ukuqokwa njengekhansela kubuye kubeke umuntu ezingeni lokuba akwazi ukuxhumana nabasondelene nomasipala. Noho, uma ikhansela lilahlekelwa yisikhundla salo alilahlekelwa nje kuphela umholo nokuhlonipheka, kodwa nokxhumana nabo bonke abathintana nomasipala nakho kuyashabalala.
Ubuhle obuza nokuqokelwa kwesobukhansela kuholela ekutheni nincintisane kanzima kubangwa ukungena ezikhundleni okugcina kube nokukhwabanisa ekuvoteleni lezo zikhundla ikakhulukazi emagatsheni, ezifundeni ngisho nakuzwelonke ngaphakathi emaqenjini.
Yize lo mbiko ungaphandle kepha abukho ubufakazi bokuthi amaqembu azilandelile izincomo zawo nokwenza kukholakale ukuthi omasipala bazoqhubeka nokuba zilaha lapho izimbangi zinqumana khona noma abathile bethelwa ngamachaphazelo njengoba kubukeka kwenzeke eNanda.
Konke lokhu kubukeka kufakazela khona ukuthi umswane wembabala usungene endlini (emaqenjini) ngakho umkhokha usazoqhubeka, basazoqhubeka ukufa abantu labo okuthiwa banec la nalabo okuthiwa bebengenacala.